ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones 5.41b182 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.41b182 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ, HD wallpaper ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, နှိုးဆော်သံအသံသည်သို့မဟုတ်ဖုန်းမြည်သံနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။ ZEDGE ™အခမဲ့နောက်ခံ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, စတစ်ကာများ, ဖုန်းမြည်သံသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ကျယ်ပြန့် catalog ကမ်းလှမ်း, နှိုးဆော်သံအသံ & အသိပေးချက်ကိုသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်အသံ။ တစ်စုံတစ်ရာရှာရန် - ဒါဟာ ZEDGE အပေါ်င်™
ပြီးသားဒီအမြင့်မားလူကြိုက်များ personalization app ကို install လုပ်ထားသူပေါင်းသန်း 300 ကျော်ကလူ🙌 Join ။
•ပိုပြီးနောက်ခံပုံ apps များရှာရန်မလိုပါ။ အသုံးအများဆုံးမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားထောက်ပံ့အခမဲ့နောက်ခံတစ်ခုအဆုံးမဲ့ရွေးချယ်ရေး။
•အပြည့်အဝ HD ကိုဝေါလ်ပေပါများနှင့်နောက်ခံအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ 4K နောက်ခံပုံများထောက်ပံ့ပေးသည်။
Fancy အနက်ရောင်ဖုန်းကိုနောက်ခံပုံများ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး girly နောက်ခံပုံ•? သင်ကရရှိပါသည်!
•တစ်ချိန်တည်းမှာသော့ခတ်မျက်နှာပြင်နောက်ခံပုံများ, ပင်မမျက်နှာပြင်နောက်ခံပုံများ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလျှောက်ထားရန် Option ကို။
•အော်တိုမှ Option ကိုရွေးချယ်ထားသည့်ကြားကာလမှာလှည့်အသစ်တစ်ခုနောက်ခံကိုရွေးပါ။
•အေးမြ filter များနှင့်စတစ်ကာများနှင့်သင်၏နောက်ခံစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
•သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာနောက်ခံအဖြစ်အေးမြဗီဒီယိုကိုသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဆိုပါစို့။ သင်ကရရှိပါသည်!
•ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကြဘူး - သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာလှည့်လာသောအခါမှသာတစ်ကြိမ်ပါဝင်သည်။
•အပိုဆောင်းသစ်ကိုတိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများတပ်ဆင်ရန်အဘယ်သူမျှမလိုအပ် - က app ထဲမှာ embedded ရဲ့။
•အားလုံးအရသာများအတွက်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ၏ကျယ်ပြန့် catalog ။
ပိုပြီးဖုန်းမြည်သံ apps များရှာရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဂီတ, သက်ရောက်မှုနှင့်ရယ်စရာတန်ချိန်အပါအဝင်အခမဲ့ဖုန်းမြည်သံတစ်ခုအဆုံးမဲ့ရွေးချယ်ရေး။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအခမဲ့ဖုန်းမြည်သံ၏ဖြစ်ကောင်းအကြီးဆုံးရွေးချယ်ရေး။
•တစ်ဦးချင်းအဆက်အသွယ်ဖုန်းမြည်သံ, နှိုးဆော်သံအသံနှင့် default အဖုန်းမြည်သံတင်ထားရန် Option ကို။ သင့်ရဲ့မိခင်သို့မဟုတ်အစ်မများအတွက်တစ်ဦးအေးမြဖုန်းမြည်သံ Apply ။
နှိုးစက် & သတိပေးချက် အသံ
•အနေနဲ့တပ်လှန့်ခြင်းနှင့်နှိုးဆော်သံအသံကသတ်မှတ်ထားဖို့ Option ကို။
•တစ်ဦးဝေါလ်ပေပါမှစတစ်ကာများ Add နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံဖန်တီးပါ။
• messaging app နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်ဝေါလ်ပေပါသို့မဟုတ်ရှယ်ယာအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
•တစ်ဦးအေးမြ meme သို့ဝေါလ်ပေပါကိုဖွင့်!
အကြိုက်ဆုံးနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
•တဦးတည်းရိုးရှင်းသောရဲ့ login နှင့်အတူသင်၏ကိရိယာများအားလုံးဖြတ်ပြီး Access ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းမြည်သံနှင့်နောက်ခံ။
•မွေးနေ့, နှစ်ပတ်လည်, ဘွဲ့ရနှင့်ပိုပြီးအဘို့အချစ်သူများနေ့နေ့နဲ့တူအခါသမယနှင့်အားလပ်ရက်များအတွက်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေအားလပ်ရက်နောက်ခံပုံများနှင့်ဖုန်းမြည်သံအပေါ်သတိပေးချက်များအဘတို့နေ့, မိခင်များနေ့, နယူးနှစ်များ, ဟယ်လိုနှင့်ခရစ္စမတ်ပေါင်းအေးမြစိတ်ကြိုက်ရယူရန်။
• ဆက်သွယ်ရန်: မလုပ်မဖြစ်သင့်လိပ်စာစာအုပ်ထဲတွင်အဆက်အသွယ်တစ်ဦးချင်းစီဖုန်းမြည်သံကိုသတ်မှတ်ချင်ပါ။
• ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ: သင်တစ်ဦးထုံးစံနောက်ခံပုံများ, ဖုန်းမြည်သံသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာသံကိုကယ်တင်နှင့်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုလို။
• သိုလှောင်မှု: လက်ရှိသတ်မှတ်ထားနောက်ခံ, ဖုန်းမြည်သံသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာသံကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့လိုအပျ ။
• System ကို setting များကို: မလုပ်မဖြစ်သင်က default ဖုန်းကိုဖုန်းမြည်သံအဖြစ်ဖုန်းမြည်သံလျှောက်ထားရန်လိုလျှင်။
• တည်နေရာ: မလုပ်မဖြစ်သင့်တည်နေရာအပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များချင်လျှင်။
ကျနော်တို့ မဟုတ် တင်သွင်းပြုပါသို့မဟုတ်သင့်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်, သိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုအသုံးပြုပါ။
ကျနော်တို့နောက်ခံပုံများကိုချစ်ဖုန်းမြည်သံကိုချစ် - ကျနော်တို့မတူကွဲပြားမှုကိုချစ်!
ZEDGE ™ - သင်အရာအားလုံး
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
fox90store စတိုး 5.23k 884.6k
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.41b182
Release date: 2018-04-25 14:07:26
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ